musha More Formula One Drivers Bio Carlos Sainz Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Carlos Sainz Biography inoratidza chokwadi nezve Hudiki hwake Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki (Monica Reyes Vázquez de Castro naCarlos Sainz Sr.), uye Musikana (Isabel Hernaez).
Moreso, Hanzvadzi dzaCarlos Sainz (Blanca naAna Sainz Vázquez), Veukama [Antonio Sainz (Sekuru), Carlos Oñoro (cousin)], Hupenyu hweMunhu, Mararamiro, Muhoro, Zvibvumirano uye mambure akakosha.
Muchidimbu, chinyorwa ichi chinokushandira iwe maonero akafara eHupenyu nhoroondo yaCarlos Sainz. Iye mutyairi weFormula 1 anotyaira Scuderia Ferrari muna 2021 padivi pemumwe wake wechikwata, Charles Leclerc. Chinyorwa chedu chinotanga pashure pokusvika kwake pasi pano. Zvakare, kusvika aenda pasi rose.
Kusimudzira kuda kwako bio yedu, heino mifananidzo yaCarlos Sainz. Chokwadi, pfuti yacho inopfupikisa Nyaya yake Yehudiki uye Biography chokwadi kubva pakuzvarwa kwake kusvika mukurumbira wake.
Carlos Sainz Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva paucheche hwake kusvika asimuka mukurumbira.
Tinoziva Carlos Sanz nekuda kwekudzikama kwake panzira. Zvisinei, kune zvakawanda kwaari kupfuura zvinosangana neziso.
Naizvozvo, zorora iwe uchiverenga kunonakidza kwechidimbu cheCarlos Sainz's Biography uye Nyaya Yehudiki. Pasina kunonoka, ngatipfuurirei.
Carlos Sanz Childhood Nyaya:
Nokuda kweBiography kutanga, Carlos Sainz Vázquez de Castro akaberekwa musi we 1st waSeptember 1994. Akasvika pasi pano neChina chekufungisisa kuna Reyes Vázquez de Castro uye baba vake, Carlos Sainz Sr. Akazvarwa muguta guru uye rine vanhu vakawanda. yeSpain, inonzi Madrid.
Mutambi akauya munyika ari pakati pemunun'una wake, Antonio Sainz nehanzvadzi yake, Blanca Sainz Vázquez uye kubva kumubatanidzwa wevabereki vavo (Reyes Vázquez de Castro naCarlos Sainz Sr.), ane pikicha yatakaratidza pano.
Tarirai Vabereki vaCarlos Sainz - Amai, Reyes Vázquez de Castro naBaba, Carlos Sainz Sr.
Vabereki vaCarlos Sainz vakamurera nevanin'ina vake muMadrid, Spain. Semwana mudiki, akafemerwa kujoina motorsport world nababa vake, Carlos Sainz Sr., shasha yerally ine mukurumbira.
Sezvo takarerwa mumhuri ine rombo rakanaka uye motorsport yakadyarwa, kuenda kumutambo wemujaho kwaibvira zvikuru.
At 2, godfather waCarlos Sainz, Juanjo Lacalle, akamupa mota yake yekutanga ine simba. Kunze kwezvo, Carlos mudiki akatoratidza tarenda rake rekutyaira.
Carlos Sanz, pa2 nemotokari yake yekutanga ine simba.
Asi zvino, chido chacho chakava nehasha pa 10. Madrid yakabhadhara baba vake, Carlos Sainz Sr, mukuonekana kwake kuWorld Rally Championship.
Carlos muduku akanga aripo. Kuita kwezviuru zvevanhu vakauya kuzokwazisa baba vake kwakamukurira. Yakanga iri nguva yekuchinja hupenyu kwaari. Saizvozvo, akatora nhanho dzake dzekutanga muKarting.
Carlos Sainz, baba vaive kumukurudzira kwehudiki mumitambo yemujaho.
Carlos Sainz Mhuri Background:
MuSpain, Carlos Sainz Vázquez de Castro, mwana waCarlos Sainz Sr. mutyairi werally wekuSpain. Baba vaCarlos vaive mumwe wevatyairi vepamutemo veTeam Peugeot Total muna 2018.
Pamusoro pezvo, Carlos Sainz Sr. akagamuchira Mukunda weAsturias Sports Award muna 2020, aine mambure anosvika mamirioni masere emadhora. Saka nekudaro, Carlos Sainz ndewemhuri yakapfuma. Vaigona kuwana uye kurarama upenyu hwomutambarakede. Kunze kwezvo, zvaida mari yakawanda kupinda mumujaho.
Carlos Sainz Mhuri Mavambo:
Kuti tione midzi yemhuri yaCarlos Sainz, takaona kuti kunze kweSpanish, anotaurawo chiItalian. Naizvozvo, pane mukana wekuve nemadzitateguru kubva kuItaly. Zvakangodaro, mutyairi wemujaho ane tarenda chizvarwa cheMadrid kwaakaberekerwa nekukurira.
Zita rake rakazara ndiCarlos Sainz Vázquez de Castro. Rekutanga kana surname yababa ndiSainz. Zvichakadaro, rechipiri kana zita remhuri yaamai ndiVázquez de Castro. Vabereki vake vese vari veSpanish.
Vakatora zita rekuti Sainz kubva pazita rekare rekare, Sancho. Zita racho rinobva pazita rechiLatin rokuti Sanctius. Iro zita rine chikwereti charo mukurumbira kune 9th-century mufiri weCordova akaritakura.
Mukupedzisa midzi yemhuri yaCarlos Sainz, tinofungidzira kuti anobva kuMadrid. Iye muSpanish uye werudzi rwevachena. Inotevera inomiririra yemifananidzo yemhuri yaCarlos Sainz.
Chiratidziro chemifananidzo chekwakabva mhuri yaCarlos Sainz.
Carlos Sanz Dzidzo:
Mutyairi wemujaho wekuSpain akapinda chikoro mutaundi rekumusha kwake, Madrid. Iro guta iguta rechipiri pakukura muEuropean Union (EU), richipfuura neBerlin chete. Nekuti Carlos Sainz akatanga Karting kubva paudiki, akaona zvichinetsa kusanganisa chikoro neKarting.
Zvisinei, vabereki vake naHelmut Marko weRed Bull's driver development program vakamukurudzira kuti akoshese chikoro. Yakava hwaro bedzi hwokuti Carlos arambe achimhanya.
Kunyange zvakadaro, paaiva kuchikoro, chidzidzo chake chakanakisisa chaiva chemabhuku. Zvimwe zvidzidzo zvaingove zvekungopedza pasina kukundikana. Dzimwe nguva, aitofanira kurara kusvika alarm yarira uyezve, akananga kuExam.
Gore rake rekupedzisira kukoreji ndipo paakatora chikamu muFormula 3 Championship. Yakanga iri nguva yakaoma, zvisinei, sezvaakapfuura. Pakupedzisira, kuwana dzidzo yakaisvonaka kwakamubetsera kuva akasununguka.
Carlos 'mazuva ekutora kunyange achiri muChikoro.
Carlos Sanz Biography - Hupenyu hwepakutanga muMotosports:
Kufanana nevatyairi veFormula One, Carlos Sainz akatangawo basa rake neKarting. Aive nemakore gumi paakatanga kudzidza zvemujaho pane imwe imba yekarting track yababa vake. Muna 10, Carlos akahwina Asia-Pacific KF2008 zita.
Muna 2009, Carlos akahwina mukombe une mukurumbira weJunior Monaco Kart, wakambohwinwa neF1 greats - Robert Kubica naSebastian Vettel.
Aivewo mumhanyi muEuropean KF3 Championship. Pamusoro pezvo, Chap yakapedza mumhanyi-wekupedzisira muSpanish Championship.
Basa rake rekutanga rakauya nekubudirira kukuru. Muna 2010, Carlos akabatana neEurocup Formula BMW semutyairi weRed Bull. Akahwina Rookie Cup. Carlos Sainz akabva ashanda nzira yake kukwira Red Bull Junior Team uye, pakupedzisira, Formula 1.
Sainz akahwina ane mukurumbira Junior Monaco Kart Cup muna 2009.
Carlos Sainz Bio - Rwendo rweMukurumbira:
Sainz akakwikwidza muFormula Renault 2.0 NEC muna 2011. Akakunda mumwaka wayo wekutanga. Muna 2012, Sainz akatora chikamu mumakwikwi eBritish neEuropean Formula 3 yeCarlin.
Akamhanyira chikwata chemujaho wemotokari kubva kuFrance (DAMS) mumwaka weFormula Renault 3.5 muna 2014. Akahwina mukombe asati aenda kuF1 naToro Rosso.
Carlos Sainz aive nemakore makumi maviri paakaita F20 yake yekutanga. Yakanga iri mwaka wakanaka wekutanga. Kuita kwake kwepamusoro kwaive kubuda nzvimbo yechishanu muKukodzera kuSpanish GP kana nzvimbo yechinomwe muSingapore GP.
Mukomana wechidiki akasaina neRenault Sport F1 Team mushure mekutyaira kweScuderia Toro Rosso mumakwikwi ekutanga e16 e2017. Carlos Sainz akaita chikwata chake kubva ku2017 United States Grand Prix.
NaRenault, mhedzisiro yake yakanaka yaive muAzerbaijan. Akabuda wechishanu. Aive wechitanhatu kuAbu Dhabi, uko akapora kubva pamudyandigere kuFrance neMexico, mijaho yaakarwirawo chigaro ichi.
Carlos Sanz Biography - Nyaya yekubudirira:
Sainz akatamira kuMcLaren kwe2019 achipedzisa kondirakiti yake neRed Bull Racing. PaBrazilian Grand Prix muna 2019, Sainz akatora musikana wake F1 podium kupedza nechitatu. Ona anosimbisa musikana wake F1 podium kupera pano.
Sainz akawedzera imwe podium nekubuda wechipiri kuMonza gore rinotevera asati aenda kuFerrari mukupera kwemwaka iwoyo.
Pa2020 Italian Grand Prix, Sainz akakwanisa chikamu chechitatu chinokatyamadza kumashure kweMercedes duo Lewis Hamilton uye Valtteri Bottas.
Aive nemujaho wake wakanakisa wekupedza wechipiri uye akangopotsa mujaho wekuhwina nemasekonzi 0.4 kubva Pierre Gasly.
Sainz akawana podium yake yechitatu neyechina nekubuda wechipiri pa2021 Monaco Grand Prix. Akazopedza wechitatu pa2021 Hungarian Grand Prix, ese eScuderia Ferrari. Carlos, uyezve, pamwe chete nemumwe wake wechikwata, Charles Leclerc Outclass McLaren, muBrazil.
Carlos Sainz achipemberera kupera kwake podium pa2021 Monaco Grand Prix.
Nezve Isabel Hernaez - Carlos Sainz's Lover:
Formula yekutanga mutambo wepamusoro-octane une chirongwa chinoda. Zvinoshamisa kuti vangani vevatyairi vachiri kuwana rudo.
Kunyange zvazvo hapana akasimbisa hukama, tinonzwisisa Carlos Sainz Jr kuti ave muukama naIsabel Hernaez.
Zvisinei, vasati vasangana naIsabel, pakanga pane fungidziro pamusoro peukama hwake naAngela Gastanaga, kunyange zvazvo nyaya yacho yaiva yenguva pfupi.
Isabel Hernaez anobva kuMadrid. Ane dhigirii reBachelor muBilingual Journalism uye anoshanda semukuru wenhau muindasitiri yemafashoni.
Carlos Sainz Jr kuva muukama naIsabel Hernaez.
Vaviri vangangove vanoda kugara vakazvimiririra nezve hupenyu hwavo, asi ipapo Isabel akagovana mafoto ake aripo pakupera kwevhiki kweGrand Prix achitsigira timu yaCarlos.
Mufananidzo waakatumira dzimwe nguva wairatidza kumuratidza kuGoodwood nemutyairi weSpanish.
Carlos Sanz Hupenyu hweMhuri:
Panguva ino muBiography yedu, ngatitaure nezve nhengo yega yega yemba yaCarlos Sanz. Chokwadi, aisakwanisa kuzviita pasina tsigiro yakasimba yeimba yake ine rudo rwemudhudhudhu. Chisungo chiri mukati mavo chakabatsira kuumba murume Carlos Sainz ave nhasi.
Mufananidzo unoyevedza waCarlos Sainz nenhengo dzemhuri yake.
Nezve Carlos Sainz Baba - Carlos Sainz Cenamor (Carlos Sainz Sr):
Baba veF1 racer, Carlos Sainz Cenamor, vakazvarwa muMadrid pazuva regumi nemaviri raApril 12. Akatumidzwa zita rekuti El Matador, Carlos Sainz Sr. paakanga aine makore gumi nematanhatu, akahwina mukwikwidzi weSpanish squash.
Akadzidza paYunivhesiti yeMutemo kwemakore maviri. Ipapo, achikurudzirwa nomukoma wake Antonio neshamwari dzake, akarega zvidzidzo zvake kuti ashande nounyanzvi somutyairi wemijaho.
Mufananidzo wababa vaCarlos Sainz - Carlos Sainz Cenamor, kaviri WRC ane zita.
Akazvarwa kuve mutambi wemitambo, agara akamira kunze nekuda kwekuda kwake kukuru uye kugona mumhando dzese dzemitambo: nhabvu, gorofu, tenesi, motocross, ski uye squash. Kwaive kuda kwake motorsports iyo yakabvisa zvakanyanya pamwanakomana wake, Carlos Jr.
Zvisinei, nyika yeRally ndiyo iyo inyanzvi ine tarenda isingawanzoiti yekushandura motokari yakanaka kuva chigadziro chinokunda. Ndiye ega mutyairi weSpanish akabata World Rally Champion zita mushure mekuhwina mukwikwidzi muna 1990 na1992.
Kubva mumwaka wa2021, Carlos Sainz Sr akabuda munzvimbo yechitatu paDakar Rally, Extreme E, Audi Dakar Project. Kazhinji, akawana 3 WRC kuhwina uye 26 podium. Carlos Sainz Cenamor akaroora Reyes Vasquez de Castro muna 97. Vane vana 1992 pamwe chete.
Mufananidzo wekufara waCarlos Sainz Cenamor (Carlos Sainz Sr) nemukadzi wake akanaka, Reyes.
Nezve Carlos Sanz Amai - Monica Reyes Vasquez de Castro:
Amai vaCarlos Sainz ndiMonica Reyes Vasquez de Castro. Hapana mubvunzo pamusoro pekuti Carlos Sainz anoda sei amai vake.
Kusvika parizvino akanakidzwa nerudo rwake, rutsigiro uye zano mumakore ake ekukura. Iyewo anoda uye anotora chikamu mumutambo wemijaho.
Reyes Vázquez de Castro mukadzi weWRC ane zita, Carlos Sainz Cenamor (Carlos Sainz Sr). Reyes naCarlos vakasangana paaiva nemakore 18.
Vakaroorana muna 1992. Mukuwedzera, mubatanidzwa wavo une vana vatatu; Blanca (1993), Carlos (1994) naAna (1998).
Mufananidzo unofadza waamai vaCarlos Sainz, Monica Reyes Vasquez de Castro.
Nezve Carlos Sainz Sista - Blanca Sainz Vazquez:
Blanca akadzidza kuBritish Council muMadrid. Mushure mezvo, akaenda kuYunivhesiti yeComillas kunodzidza Bhizinesi. Akabva aita nyanzvi yekubhanga internship asati apinda mune zvemitambo manejimendi.
Muna 2018 akashandira jimu yaTracy Anderson (murairidzi wemukurumbira), uye kubvira 2019 anga achishanda mukusimudzira bhizinesi reReebok Sports Club, cheni yejimu dzababa vake, Carlos, nababamunini vake, Antonio Sainz. .
Blanca Sainz Vázquez anoshanda mukusimudzira bhizinesi reReebok Sports Club
Nezve Carlos Sainz Sista - Ana Sainz Vazquez:
Ana parizvino ari kudzidza Business Administration and Management (ADE) paIE University kuMadrid. Kunyangwe achitora chikamu muchimiro chebhizinesi chababa vake nababamunini gym, anozvitsaurira kuchikamu chefashoni.
Mufananidzo waCarlos Sista, Ana Sainz Vazquez.
About Carlos Sanz Relatives:
Mutyairi weSpanish F1 anofanira kunge aine dzimwe hama. Carlos Sainz Jr. ane vashoma vemhuri yakakura kunze kwababa vake, amai uye Hanzvadzi. Nokudaro, ane vana babamunini, vanamainini, vanasekuru nasekuru, pakati pevamwe.
Vanasekuru vababa vaCarlos vaive Antonio Sainz Rebollo naJulia Cenamor. Vaviri vakaita basa rakakura muCarlos Sainz Senior's basa.
Kunze kwasekuru nasekuru vake (Antonio Sainz Rebollo naJulia Cenamor), Sainz ane Cousin, Carlos Onoro. Ndiye maneja wejimu yababa vaCarlos Sainz.
Uyezve, tinogona kufanana naSekuru vake, Antonio Sainz Cenamor. Antonio akaberekwa musi we 10th waDecember 1957. Kungofanana nababa vaCarlos, iyewo ari mutyairi we rally.
Collage yasekuru nasekuru vaCarlos Sainz (Antonio Sainz Rebollo naJulia Cenamor) uye muzukuru, Carlos Onoro (kuruboshwe).
The Spaniard ari pakati pevanonyanya kunakidza nyeredzi muF1 nhasi. Carlos Sainz anofarira kutandara neshamwari uye nevadikani. Zvaanofarira zvinosanganisira kuchovha bhasikoro, gorofu, skating, mitambo yeBeach, kushambira uye nhabvu. Anodawo imbwa semhuka dzinovaraidza.
The Spaniard, Carlos Sainz, ari pakati pevanonyanya kufadza nyeredzi muF1 nhasi.
Kubva paudiki, mazororo ezhizha aive nguva dzezororo nekufamba. Carlos anochengeta tsika iyoyo kusvika nhasi. Majorca inzvimbo yaanofarira yeZhizha vibes. Ona vhidhiyo pano.
Carlos Sainz anoshandisa nzira yake yekubatsira kuchengetedza hukama nevateveri vari kukura. Anowanzo taurira mhuri yake, shamwari uye hukama pane yake nguva. Yake Instagram account chete ine vateveri vanopfuura mamirioni 3.6.
Saizvozvo, rudo harungogumiri kune vateveri vake. Inotambanukira kuchikwata chake. Nakidzwa nevhidhiyo sezvo timu yeScuderia Ferrari yakapemberera zuva rekuzvarwa kwaCarlos Sainz kuMaranello.
Carlos Sanz Mararamiro:
Formula One mutambo une mukurumbira umo vatyairi vanowana mibairo mikuru. Vatyairi vashoma vanoda Lewis Hamilton iri pakati pevatambi vanobhadharwa zvakanyanya munyika yemitambo. Saizvozvo, Carlos Sainz ari pakati pevakapfuma Formula One vatyairi.
Nekudaro, panguva ino yehupenyu, Carlos haana kunyanya kutarisa paLuxury. Kunze kwezvo, ane tarisiro yokuwana zvakawanda munguva yemberi. Akagara muMilton Keynes kwemakore maviri asati atamira kuimba yake iri nyore pedyo neLondon muChelsea.
Aimbove mutyairi weMcLaren, uyo ave kumhanyira Ferrari, anogona kuwana tarisiro yekutyaira mota inoshamisa. Zvakadaro, Carlos Sainz ane imwe mhando yemota dzatinotarisira.
Zvinoshamisa kuti mutyairi weF1 akapfuma uye akabudirira angave ane mota ine mwero. Anotasva Volkswagen Golf. Asi akazosimudzira kuti ave ne $240,000 McLaren 600LT.
Sekureva kweMedia Referee mishumo, Carlos Sainz ane mambure anoshamisa emadhora matanhatu uye muhoro wepagore wemadhora masere emamiriyoni. Mazhinji eCarlos Sainz Jr. mambure akakosha anobva pamari yaanowana kubva kuF6 uye kutsigira kwake.
Mihoro yaSainz inomupa $240,000 McLaren 600LT.
Carlos Sanz Kutsigira:
Zvese nekuda kwemukurumbira wake uri kuwedzera, Sainz ane vakati wandei vanotsigira zita rake. Kambani yedoro Estrella Galicia inonyanya kutsigira Spaniard. Vamwe vatsigiri vanosanganisira McLaren, PlayStation, Ferrari uye Shiseido Men.
Carlos Sanz Untold Chokwadi:
Mumakore mashanu, Carlos Sainz akatyaira kweinenge hafu yezvikwata zvese muFormula 1. Mushure mekutanga kwake F1 naToro Rosso, akatamira kuRenault, kwaakabatana naNico Hulkenberg.
Uyezve, Fernando paakasiya chigaro chisina munhu kuMcLaren muna 2019, Sainz akamutsiva, achibatana naye. Lando Norris.
Mushure mekupera kwa2020, Sainz akasaina chibvumirano chemakore maviri neScuderia Ferrari kubva ku2021. chinhu chinonyanya kukosha chehupenyu hwake. Achatyaira padivi paCharles Leclerc. Chii chimwe? Pazasi pane zvishoma zvinokatyamadza zvimwe chokwadi nezveMadrid-yekuzvarwa F1 mujaho.
Pamusoro peHelmet yake:
Ngowani yaCarlos Sainz ya2021 isanganiswa yedhizaini yake muhupenyu hwake hwose. Ngowani ine musimboti weScuderia Ferrari. Mureza weSpain pamativi anokura muhukuru uye anoshandisa mitsva mitsva yetsvuku.
Mukuwedzera, kumusoro uye kumberi kwengowani kwakasviba. Ngowani inoshandisa ma touch ered anomiririra Scuderia. Carlos anoratidza mungowani yake nyeredzi yaMaria de Villota, sezvaanogara achiita. Anosanganisirawo Cavallino Rampante uye chilli!
Ngowani yaCarlos Sainz ya2021 isanganiswa yedhizaini yake muhupenyu hwake hwose.
Kunze kwekumhanya, Carlos anotsigira uye anotora chikamu muzvirongwa zvemagariro. Iye mumiriri weMaria de Villota's Legacy. Anoshandawo neAvanza ONG uye Fundación Juegaterapia kubatsira vanhu vanoshaya.
Juegaterapia inopa zvinyaradzo, mahwendefa nemitambo yemavhidhiyo kumawadhi evana ezvipatara zveSpanish zvakasiyana. Chinangwa chiri chekuti vana vadiki vawane nguva yakanaka pavanenge vachirapwa.
Kunze kwekushanda neJuegaterapia, Carlos akapa sutu yemujaho yakatengeswa nemari inodarika zviuru zvipfumbamwe zvemaeuro neACB #LaMejorAsistencia. Zvese zvakaitika zvakaenda kumushandirapamwe #NuestraMejorVictoria, wakatangwa naPau Gasol naRafael Nadal.
Spaniard akakwidza mari yeRed Cross nekuonekwa mumijaho yakati wandei yerudo muGran Turismo Sport yePlayStation4.
Ndakatarisa kumusoro kuna Fernando Alonso Kubva Pazera Rekutanga:
Muenzaniso waCarlos Sanz wehudiki ndewenyika yake, Fernando Alonso. Pavatyairi veFormula One vanoshanda, Alonso anoramba ari mumwe wevatyairi veFormula One vakashongedzwa kwazvo munhoroondo, aine mazita maviri epasirese kuzita rake.
Kunze kweF1, Alonso akahwina mazita akawanda mune mamwe ma motorsports, kusanganisira ane mukurumbira 24 Maawa eLe Mans. Nekubudirira kwakadai, zviri pachena kuti nei Sainz akashuvira kutevera nzira yaFernando pavakasangana muna 2006 kuSpanish Grand Prix, Barcelona.
Carlos Sainz, ane muenzaniso wake wehudiki, Fernando Alonso.
Carlos Sanz Chitendero:
Mutyairi wemujaho weSpanish F1, sezvakangoita vazhinji vekuMadrid, muKristu. Anotenda muna Mwari vatatu-mu-mumwe akasika denga, pasi uye nedenga.
Kutenda kwacho kwakabva muchitendero chechiJudha. VaKristu vanotenda kuti Jesu ndiye “Mesiya” kana kuti muponesi wenyika. Vanofungawo kuti mwanakomana waMwari.
Carlos Sanz Biography pfupiso:
Carlos Sainz Jr anga achiratidza zviratidzo zvekuti anogona kuve shasha yeFormula One mune ramangwana. Sezvineiwo, kukurumidza kufenda kuburikidza naCarlos Sainz's Biography uye Childhood Nyaya, takadzidza nezvese zvaungada kuziva nezvake.
Heino Networth yake, Zera, Huremu, Weight, Musikana, Vabereki, Sista, Hama, Simuka mukurumbira, Networth nezvimwe zvakawanda zvakaunganidzwa patafura iri pazasi.
Zita rizere: Carlos Sainz Vázquez de Castro
Zita rekudanwa: Carlos Sanz, Chilli
Zuva rekuzvarwa: 1st Zuva raSeptember 1994
Age: (27 makore nemwedzi 10)
Nzvimbo yekuzvarirwa: Madrid, Spain
2021 timu: Ferrari
Nhamba yemotokari: 55
Mapinda: 137 (136 kutanga)
Chikwereti: Grand Prix Australian Grand Prix (2015)
Baba: Carlos Sainz Cenamor (Carlos Sainz Sr)
Amai: Monica Reyes Vasquez de Castro
Sisters: Blanca (1993) naAna (1998).
Hama: Antonio Sainz (Muzukuru), Carlos Oñoro (muzukuru)
Musikana: Isabel Hernaez
Ex-Musikana: Angela Gastanaga
Hobbies: Nhabvu, Waterboarding, Swimming, Gorofu, Kufamba uye Squash
kukwirira:	 5 ft 11 mu (1.78 m)
Weight: 141b (64kg)
Muhoro: $ 8 Million
Net Worth:	 $ Miriyoni 6
Social Media: facebook (Carlossainz55), instagram (carlossainz55), twitter (carlossainz55) uye youtube.
Sezvatinotenderedza Carlos Sainz's Biography uye Childhood Hupenyu Nyaya, ndinofungidzira iwe unogona kutora zvidzidzo zvishoma. Iwe unofanirwa kunge waona kuti Carlos Sainz akatora sei nhanho dzake dzekutanga mukarting.
Zvakare, sezvakaita chero mutyairi anoda kusvika Formula 1, aifanira kuzviratidza nhanho dzese dzenzira. Muchiitiko chake, aifanira kushanda nesimba kuti abvume avo vasina chokwadi netarenda rake nekuda kwezita remhuri yake.
Carlos Sanz akapedza hudiki hwake achishanda kuti azadzise kurota kwake. Akaita nhamburiko isina kujairika kubata dzvinyiriro yemujaho wenyika dzakawanda uye kuoma kwezvidzidzo zvake zvedzidzo. Carlos haana kumborega. Panzvimbo pezvo, akaita budiriro. Nguva yakaratidza kuti akanga akarurama.
Tinovimba wakaverenga zvinonakidza mukati meBio nyaya yedu. Nyorera kune yedu Formula One Drivers 'Biography. Kurongeka uye yepamusoro-notch mhando ndiwo masiginecha edu.